Formaprod – FTM/CPM : miasa ho an’ny tanora mandritra ny telo taona any Vatomandry | NewsMada
Formaprod – FTM/CPM : miasa ho an’ny tanora mandritra ny telo taona any Vatomandry
Mitohy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Formaprod (1) sy ny FTM/CPM(2), amin’ny fanampiana ny tanora tsy nahavita fianarana firy nefa tsy manana antom-pivelomana. Iaraha-mitsinjo ny tanora eo anelanelan’ny 14 hatramin’ny 29 taona.
Any amin’ny distrikan’i Vatomandry, faritra Atsi­nanana no safidy iray amin’ity fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny For­ma­prod sy ny FTM/CPM ity, eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ary ny jono. Tanora 360 avy amin’ny kaominina 10 ni­safidiana hanaraka fiofanana amin’ny fambolena, fiompiana, ary ny jono. Miankina amin’ny safidin’ny tsirairay ny lalam-piofanana homena azy : fambolem-bary na katsaka, fiompiana akoho gasy, jono an-dranomamy na an-dranomasina.
Laharam-pahamehana ireo seha-pihariana ireo ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy fanomezana asa ho an’ireo tanora ho fisorohana ny mety hanimba ny fiaraha-monina. Tanora tsy nahavita fianarana, tsy mbola nanaraka fiofanana, manana finiavana hivoatra no anisan’ny nisafidianana ireo tanora ireo. Natomboka ny volana novambra 2019 ny fiofanana, telo volana ny faharetany ka 120 hatramin’izao no efa nanaraka izany.
Ny faran’ny herinandro teo, navoaka tao amin’ny Mai­son des Jeunes Vato­man­dry ireo nisafidy ny fihariana jono. Notolorana fitaovana hoenti-manjono izy ireo ary mbola arahi-maso, mandritra ny enim-bolana. Aorian’izay, hisy ny tombana ka hanomezana fitaovana tena mahamatihanina azy ireo hirosohana bebe kokoa amin’izany fihariana izany.
Tokony hihatsara izany ny fiveloman’ireo tanora ireo noho izao fanohanana izao, fanomezana fiofanana miampy fitaovana. Io fitaovana io indrindra no tena manahirana azy ireo, satria tsy misy ny vola hoenti-manana izany na te hiary amin’ilay asa tiana atao aza. Na manao amin’izay misy, saingy tsizarizary, tsy ho tonga matihanina mihitsy. Telo taona misitraka ny fanohanan’ ny Formaprod sy ny FTM/ CPM ny tanora ao amin’ny distrikan’i Vatomandry. Mino ireo tompon’andraikitra fa betsaka ny ho tafavoaka. Ireo tanora moa nisaotra ny fisian’izao tetikasa izao.
Misy ny FTM/CPM ny faritra 22 eto amin’ny Nosy, ahitana fikambanan’ny tantsaha 2240, mpikambana 20 499, vehivavy 22,2 % ary lehilahy 77,8 %. Mbola vitsy ireo mpikambana ireo raha jerena ny isan’ny tantsaha 12 tapitrisa. Noho izany, mitaky laminasa lehibe, maharitra ary maro ny tontolo ambanivohitra , ma­nampy ny efa ataon’ny FTM/ CPM miaraka amin’ny For­ma­prod.
-Formaprod (1) : Pro­gram­me de formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole.
-FTM /CPM (2): Fikam­banan’ny tantsaha eto Mada­gasikara/ Coalition paysanne de Madagascar